Cabsi xooggan oo la soo deristay shacabka reer Cadaado iyo Wararkii ugu dambeeyay Xaalada… | HalQaran.com
Cabsi xooggan oo la soo deristay shacabka reer Cadaado iyo Wararkii ugu dambeeyay Xaalada…
Cadaado (Halqaran.com) – Bulshada ku dhaqan Magaalada Cadaado ee Gobolka Galgaduud ayaa waxaa la soo deristay cabsi, ka dib markii maleeshiyada Ururka Al-Shabaab ay la wareegeen deegaan hoos-tagga magaaladaasi.
Maleeshiyada Ururka Al-Shabaab ayaa Sabtidii bilaa dagaal kula wareegay Deegaanka Qaayib, iyadoo dhinaca kalena ay ka furayn maxkamad ay sheegeen inay u garsoori doonto dadka cadaaladda u baahan.
Deegaanka Qaayib oo laga xukumo Magaalada Cadaado ayaa ah deegaan ay ku badan yihiin dadka xoolo dhaqatada ah, iyadoo dadka reer Cadaadana ay xilliyada qaarkood u socdaalaan deegaankaasi.
Cabsida dadka ku dhalatay ayaa timid, ka dib markii ay siyaabooyin kala duwan u fasirteen hadalkii Shabaabka, ee ahaa inaanay u cadaalad doonan Maxkamadaha Galmudug, oo halkaasi ay u soo cadaalad raadsadaan.
Sidoo kale, bulshada deegaanka ayaa waxay ka baqdin qabaan in Ciidanka Xoogga Dalka oo Jimcihii Gobolka Galgaduud kaga dhawaaqay hawlgal ballaaran oo ka dhan ah Ururka Al-Shabaab ay soo weeraran Shabaabka halkaasi qabsaday, waxyeelana ay ka soo gaarto xubnaha qoysaskooda iyo eheladooduba.
Wararka ayaa sheegaya in qorshaha ay Al-Shabaab kula wareegtay Deegaanka Qaayib ay baqdin ku keentay shacabka reer Cadaado iyo kuwa kale ee ku dhaqan deegaanada ku xeeran magaaladaasi.
Masuuliyiinta Maamulka Galmudug iyo Saraakiisha Ciidanka Xoogga Dalka ee Qaybta 21aad ayaan ka hadlin xaaladda ku soo korortay Cadaado iyo deegaanada kale ee hoos-tagga.
Cabsi soo waadjahday
Shabaab la wareegay magaalada
shacabka reer Cadaado